Amiirkii hore ee dalka Qadar Sheekh Khaliifa Bin Xamad oo geeriyooday – STAR FM SOMALIA
Amiirkii hore ee dalka Qadar Sheekh Khaliifa Bin Xamad oo geeriyooday
Amiirkii hore ee dalka Qadar Sheekh Khalifa Bin Xamad Al-Thani, ayaa geeriyooday, sida ay shaacisay Dowladda Qadar, waxa uu ku geeriyooday Amiirkii hore Magaalada Doxa ee caasimada dalkaasi.
Sheekh Khalifa, ayaa geeriyooday isaga oo jira da’da 84-sano jir, waxaana uu u geeriyooday xanuuno haayay.
Maamulka Qasriga boqortooyada dalka Qadar ayaa shaaciyay in marxuumkaasi loo sameyn doono aas qaran,isla markaana muddo 3-cisho ah dalka ay ka dhacayaan baroor-diiq.
Amiirka hadda ka taliiya dalkaasi Tamiim bin Xamdi Al Tani oo isna xukunka dalkaasi la wareegay 2013kii waxaa dhalay Amiirka geeriyooday.
Turkiga oo ku biiray dagaalka Daacish looga saarayo magaalada Mosul
Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Itoobiya